1. Lugood-sida Tools in Android
1.1 Lugood Alternative Software
1.2 Lugood Alternative Apps
1.3 Lugood Apps Remote
2. Lugood U u Android
3. Transfer Lugood in Android
4. Lugood Transfer u Android
Haddii aad weligaa isticmaali aaladaha Apple ah waa in aad user Lugood ah; u isticmaalo si uu u hagaagsan, abaabulo oo loo maareeyo faylasha aad ku iPod, iPhone ama iPad. Waxaa laga yaabaa in hadda, si kastaba ha ahaatee, aad rogmaday inuu taageerayaal ah Android, halka ma jirto sida codsi u aynu aad maamuli waxyaabaha aad Android.
Dabcan, in kastoo ay jiraan wax saxda ah Lugood feature-to-feature nuqul u Android, waxaad weli mid aad keeni kartaa waayo-aragnimo ah Lugood-sida ee Android ka heli kartaa. Wondershare TunesGo (Mac) ama Wondershare TunesGo (Win) shaqeeyaa sida Lugood u Android telefoonada ama kiniiniga. Waa software si sahlan loo isticmaali u Mac kaa caawinaya in aad u hagaagsan Lugood music, playlists, podcasts, filimada, bandhigyada TV, Lugood U si ay Android, iyo qeybsanaan. Intaa waxaa dheer, waxa kale oo aad ku wareejin karaa files ka Mac in Android.
Features Key ee TunesGo Wondershare:
1. nidaameed Lugood in Android
Nidaameed Lugood in Android: nidaameed oo dhan music, playlists, filimada, Lugood U, podcasts, waxay muujinaysaa TV ama files warbaahinta soo xulay Lugood in telefoonada Android iyo kiniiniyada.
Files Computer 2. Transfer in Android, iyo qeybsanaan
Bedelka files kombiyuutar si ay Android
riteen Kaydinta of songs, filimada, sawiro ku saabsan Mac? Hadda, waxaad isticmaali kartaa TunesGo loo wareejiyo telefoonka Android ama kiniin ah, si aad iyaga ku raaxaysan karaan mar kasta oo aad tagto.
Tallaabada 1. Tag geeska uppter xaq iyo guji suuqa kala .Waxaa Android Finder soo baxa.
Tallaabada 2. Dooro nooca file galeeysid bidix ah, guji Music, Photos, Movies ama Kuwo kale (documents). Jiitaa Simple jeedi music, filimada, sawiro iyo document files ka Mac in aad telefoon ama Android miiska.
Android wareejiyo Mac / Lugood
version ayaa Mac xitaa kuu ogolaanayaa inaad si ay u gudbiyaan music, filimada, sawiro iyo waraaqaha ka Android inay Mac. kaliya inaad raacdo tallaabooyinka. Dooro nooca file galeeysid bidix ah oo sax aad files doonayo. Midig u guji ama contrl riix files doortay iyo dooran dhoofinta si Mac ama dhoofinta in Lugood .
3. Nadiifinta Lugood Library
Your Lugood waxaa la waayey music nuqul, filimada iyo in ka badan? tags badan music ayaa maqan? Ha welwelin. TunesGo u Android ka caawisaa in ay nadiifiyaan gabayadii nuqul, iyo hagaajin tags music, cover iyo tacks Lugood maqan.
4. Taageerada 2000 + Android Devices
La jaan qaada Android: From Android 2.1 in Android 4.4
Taageer qalabka Android: Samsung, LG, Google, Motorola, HTC. Sony, ZTE, Huawei iyo in ka badan .
> Resource > Lugood > Lugood u Android: Maamul Your Tusmada Android Effortlessly